नेपाली कांग्रेसले काठमाडौं महानगरमा राजुराज जोशीलाई मेयर पदका उमेदवार बनाएको छ । जोशीको उमेदवारी किन ? उनी विजय भए महानगर कस्तो बनाउँलान् ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर काठमाडौं महानगरमा मेयरका उमेदवार जोशीसँग गरेको कुराकानीः
काठमाडौं महानगरको मेयरमा तपाईंको उमेदवारी केका लागि ?
काठमाडौंमा जुन किसिमको अप्राकृतिक गठबन्धन देखिएको छ, सत्तालोलुपता र सत्तास्वार्थका लागि परिआए जोसँग जस्तो पनि सम्झौता गर्ने जुन परिपाटी देखिएको छ, त्यसको विरुद्ध हो मेरो उमेदवारी ।
अर्को, लोकतन्त्रको संस्थागत सुद्धिढिकरण, स्थानीय तहको सबलिकरणका लागि कांग्रेसको विजय अपरिहार्य छ । जसरी कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान बन्यो र मुलुक एकखालको संविधानविहीनताको अवस्थाबाट पार लाग्यो । स्थानीय निर्वाचनमार्फत कांग्रेस सुदृढ स्थानीय सरकारको अपेक्षा गरिहेको छ । लोकतन्त्रलाई आधारभूत तहसम्मै विस्तार र विकास गर्न खोजिरहेको छ त्यसैका लागि पनि मेरो उमेदवारी हो ।
त्यसका अलावा अरु एजेन्डा पनि होलान् नि !
महानगरको समृद्धि र महानगरबासीको समुन्नती नै मेरो प्राथमिकता हो । उहाँहरूको उन्नती प्रगती नै महानगरको लक्ष्य हो । त्यसका अतिरिक्त नेपाली कांग्रेसले महानगरको धूलो, धुवाँको दीर्घ समाधान खोजिरहेको छ । ट्राफिक जामका कारण घन्टौँ बाटामा अड्किनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । त्यसका लागि अन्डरग्राउन्ड मेट्रो रेल, फ्लाइओभरआदी विकल्प हुन सक्छन् । कांग्रेसले काठमाडौं महानगरको मेयर जितेको खण्डमा हामी पाँच वर्षभित्रमै यी सपना पूरा गर्न चाहन्छौँ । महानगरभित्रका सरकारी विद्यालयको हालत उस्तै छ । शिक्षक छन् विद्यार्थी भर्ना नै हुन आउँदैनन् । कतिपय ठाउँमा शिक्षक भन्दा विद्यार्थी थोरै भइसके, अब त्यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।
स्वास्थ्यको अवस्था उस्तै छ । संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा त राखियो तर उपचारको प्रवन्ध छैन । व्यवस्थित अस्पताल छैन, प्रसुती गराउने अस्पतालको दूरवस्था उस्तै छ । यी सबै समस्याको निराकरणका लािग कांग्रेसको जित अपरिहार्य छ ।
भूकम्प गएको दुई वर्ष वित्यो । धरहरा लडेको लड्यै छ । रानीपोखरी मरुतुल्य बन्यो । अन्त ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहरहरू खण्डहर छन् । कहिले बन्ने टुंगो छैन, यस्तो अन्योलताबाट पार लगाउँछ कांग्रेसले । त्यतिमात्र होइन त्यसको जीवन्तता, सांस्कृतिक पक्ष, पुरातात्विक पक्षको जगेर्ना गर्दै यथाशीघ्र पुनःनिर्माण गर्नुपर्छ ।
अहिले विमानस्थलमा हेर्न जानुभयो भने कारुणिक अवस्था छ । दैनिक दुई हजारमाथि युवा विदेशिन्छन् । तिनका परिवारको आँसुको भेल बग्छ । ती दूर दराजका मात्र छैनन् ।
काठमाडौँबासी निम्न आए भएका, अझ विशेष गरी सहरी गरिब वर्ग पनि छन् । बाहिर जान, वैदेशिक रोजगारीमार्फत सस्तोमा श्रम बेच्न अभिशप्त युवालाई महानगरले रोजगारी दिन चाहन्छ । सूचना, प्रविधिमार्फत उनीहरूको ज्ञानको दायरा फराकिलो पार्ने र महानगरका वार्षिक २० हजार युवालाई रोजगारी दिने कांग्रेसको लक्ष्य छ । यसबाहेक कांग्रेसले अल्प र दीर्घकालीन विभिन्न योजना बनाउने नै छ ।
मतदाताले तपाईंलाई नै रोज्लान् ?
काठमाडौं महानगरका सचेत मतदाताको कांग्रेसप्रति मोह छ । विगतको दुई वटा निर्वाचन त्यसको दृष्टान्त हो । अहिले एमाले र राप्रपा जुन रवैयाका साथ प्रस्तुत भइरहेका छन्, त्यसले महानगरबासी सशंकित भइरहेका छन् ।
एमाले र राप्रपा मिल्नु भनेको हार स्वीकार्नु हो । ती दुवै दल हारिसके । अर्को, गम्भीर कुरा छ, त्यो के हो भने एमाले राप्रपा दुवै महिला विरोधी देखिए । संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्थाको खिलाफमा उनीहरूले उमेदवारी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । गठजोड गरेका छन् । महिलाहरूले उनीहरूलाई कसरी मत हाल्छन् ?
निर्वाचन जित्नेमा कांग्रेस कत्तिको विश्वस्त छ ?
हामी प्रशस्तै मतले जित्छौँ । तपाईंलाई भनौँ, कांग्रेसले काठमाडौं महानगरमा ५० हजार मतले लिड गर्छ ।